Nofidiana ho voavonjy
"Araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika" — Efes. 1:4
Tokony hino isika fa nofidin' Andriamanitra ho voavonjy amin' ny alalan'ny fiainana ny finoana, ny fahasoavan'i Kristy ary ny asan'ny Fanahy Masina. Tokony hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika noho ny nanehoany amin'ny fomba mahagaga ny fankasitrahany izay tsy noho ny fahamendrehantsika. Ny fitiavan'Andriamanitra no mitarika ny fanahy hanatona an'i Kristy mba ho azo ekena maimaimpoana sy ho afaka hiseho eo anatrehan'ny Rainy izy. Noho ny asan'ny Fanahy Masina dia nohavaozina ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny mpanota. Hoy ny Raintsika any an-danitra hoe: "Ary hianareo ho oloko, ary Izaho ho Andriamanitrareo. Hamindra fo aminy tokoa Aho; hampodiko aminy ny fifaliana (...) Ho rakitra soa ho ahy ireny; izao olona noforoniko ho Ahy izao no hanambara ny fiderana Ahy" (jereo ny Jer. 30:22; 31:1,33; Eks. 19:5).
Miantso ny fanahy hanatona Azy i Kristy, ary iankinan'ny ankehitriny sy ny mandrakizay ny mandre sy mamaly izany antso izany. Hoy i Kristy: "Tsy hianareo no nifidy Ahy fa Izaho no nifidy anareo" - Jao 15:16. Koa aoka izay antsoina hoe zanak'Andriamanitra hanaiky ny fanasan'i Kristy, ary hitoetra eo amin'izay hamirapiratan'ny fahazavan'ny lanitra amin' izy ireo, eo amin'izay hahatsapany ny maha-mpihaino sy mpankato ny tenin'i Kristy, hanarahany Ilay Fahazavan'izao tontolo izao, ary hanekena azy ao amin' ilay Malalany.
Izay rehetra azon'Andriamanitra natao dia nataony ho famonjena ny olona. Tao amin'ny fanomezana sarobidy iray no nandrotsahany ny haren'ny lanitra. Miangavy Izy, mitalaho, mandresy lahatra, saingy tsy hanery ny olona hanatona Azy. Miandry ny faneken'izy ireo hiara-miasa Izy. Miandry ny fanekena an-tsitrapo amin' ny mpanota ny haren'ny fahasoavana nomaniny ho azy hatrizay nanorenana izao tontolo izao (...) Tsy noforonin'Andriamanitra ho simba ny herin' olombelona, fa amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra no hahatonga ny olona ho tonga fitaovana mahomby kokoa eo an-tanany (...) Manolotra amin'ny olona ny tombontsoa hiara-miombona antoka Aminy Andriamanitra. — Mes., 26 Apr. 1893.
Fisintonana ara - panahy: mianaka amin’i Pasteur THIERRY MATHIEU